I-LIVERPOOL EZINHLELWENI ZOKUTHEZA ABASHA - Ilanga News
Home Ezemidlalo I-LIVERPOOL EZINHLELWENI ZOKUTHEZA ABASHA
I-LIVERPOOL EZINHLELWENI ZOKUTHEZA ABASHA
UMARCELO Brozovic we-Inter Milan ozingelwa yiLiverpool FC.
ISEBENZA buthule iLiverpoool yase-England okuvela ukuthi kunabadlali ebagaqele njengoba imidlalo imisiwe ngenxa ye-coronavirus ehlasele emazweni ama-ningi emhlabeni.
Imidlalo ye-English Premiership imiswe iLiverpool iqhwakele ngamaphuzu angu-82 emidlalweni engu-29.
Le kilabhu sekuvele ukuthi ishela isinyenyela uMarcelo Brozovic waseCroatia ogijima kwi-Inter Milan yase-Italy. Ngaphezu kwalokhu, iLiverpool imataniswa noTimo Werner waseGermany odlala kwiRB Leipzig yakulona leliya lizwe.
IRB Leipzig kuthiwa izimisele ngokungena ezingxoxweni namakilabhu agaqele lo mdlali ngemuva kokudamba kwe-coronavirus. UWerner kuvela nokuthi ufunwa uthuli yiBayern Munich nayo yaseGermany. UJurgen Klopp waseGermany ongumqeqeshi weLiverpool, kuthiwa usenqume ukuzixoxela ngqo nalo mdlali ukuze ajoyine ezakhe. Kwenzeka lokhu nje, sekunesikhathi iLiverpool imataniswa noMilot Rashica waseKosovo odlala kwiWerder Bremen yaseGermany.
Imenenja yalo mdlali isanda kuphumela obala ngokuthi kukhona izingxoxo ezongena kuzona nekilabhu efuna lo mdlali. Kusolwa ukuthi ufuna ukumyisa kuyona iLiverpool.
IThe Reds kuvela ukuthi isembangweni owumshoshaphansi neLeicester City wokusayinisa uKostas Tsimikas waseGreece osemabhukwini e-Olympiakos yakulona leliya lizwe. I-Olympiakos iphethwe ngu-Evangelos Marinakis waseGreece ongesinye sezikhulu okuvele ukuthi zihaqwe yi-coronavirus. Lesi siqumama esinenqwaba yemikhumbi, siphinde sibe wu-mnikazi weNottingham Forest yase-England.
Previous articleunovalo umqeqeshi ojikiswe e-afrika
Next articleusanethemba umengameli we-WA